Compu BayDaThuKhuMaကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
# (၂)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများPublished April 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၂)ဖြစ်ပါက (၂)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို မသိပါက ကိုယ်မွေး သော ခရစ်ခုနှစ်ထဲမှ (၆၃၈) ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို ရပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့် မွေးရက် မွေးလသည် မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီဖြစ်လျှင် (၁)တိုးပြီး (၆၃၉)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်းမွေးလျှင် (၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |5Comments	# (၁)ကြွင်းမဟာဘုတ် ဖွားများ၏ ယေဘူယျ ၀ိသေသလက္ခဏာများPublished April 10, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို (၇) နဲ့ စားပြီး ကြွင်းသော ဂဏန်းသည် (၁) ဖြစ်ပါက (၁)ကြွင်းဖွားများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ်ထဲမှ(၆၃၈)ဂဏန်းကို နုတ်လိုက်လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို ရရှိပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်မွေးရက်မွေးလသည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ်ပါက (၆၃၉)ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။ မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၃၁)အတွင်း မွေးလျှင် (၆၃၈) ဂဏန်းကို နုတ်ရပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	# အင်တူလက်မျှ နဂိုပPublished February 11, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged ingaweikza, Myanmar Astrology, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, အင်တူလက်မျှ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |5Comments	# ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ ဟူးရားဗေဒင် (၁)Published February 9, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဟူးရားဗေဒင်ဆိုတာ မွေးသက္ကရာဇ်၊ မွေးနေ့၊ မွေးချိန်မလိုဘဲ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဇာတာဖွဲ့၊ လက်တပ်ပြီး ဟောပြော တဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ကို (Horary Astrology) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Hora ဆိုတာ Hour (နာရီအချိန်) ကနေ ဆင်းသက် လာတာ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအချိန်နာရီကို မူတည်ပြီး ဇာတာဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို တွက်ချက် ဟောပြောတဲ့ ပညာရပ်ကို “ဟူးရားဗေဒင်ပညာ” လို့ ခေါ်ဆို ကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဗေဒင်ပညာရပ်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဟူးရားဗေဒင်မှာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘာပြုလို့လဲ ဆိုတော့ ဟူးရားဗေဒင် တွက်မယ်ဆိုရင် မွေးနေ့ မွေးသက္ကရာဇ် မလိုလို့ပါ။ ဒါကလည်း ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ ဇာတိက အထက်အညာ၊ တောအရပ်ဒေသ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဒေသနေသူအများစုဟာ ကိုယ် ဘာနေ့ သားသမီး ဆိုတာ လောက်ဘဲ သိကြပြီး မွေးတဲ့ရက်၊ လ၊ နာရီ အတိအကျ မသိကြတာက များပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ဗေဒင်ပညာလိုက်စားခါစ ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲ အလွန်တွေ့စေ ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်သာ သိချင်သိမယ်။ မွေးချိန်နာရီ အတိအကျမရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီခေတ်က နာရီဆိုလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေလောက်ဘဲ ရှိကြတာဆိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက အုန်းမောင်း ခေါက်တဲ့ အချိန်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအချိန်ကိုသာ မွေးချိန်အဖြစ် မှတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ နာရီအတိအကျသိရမှ ဇာတာဖွဲ့လို့ရတဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ ဟာ တောအရပ်ဒေသတွေမှာ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီး မထုတ်နိုင် တော့တဲ့ ဘဝကို ရောက်ရပါတော့တယ်။
မွေးချိန်အတိအကျသိရမှ ဗေဒင်ဟောလို့ရမယ်ဆိုတာဟာ- နှိုင်းယှဉ်ပြရရင် ယခုခေတ် အနောက်တိုင်းဆေးပညာသုံး ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးလက်နက် ကရိယာ မရှိတဲ့ အရပ်ဒေသကို ရောက်နေရင် ဘာမှလုပ်မရတဲ့ ရောက်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ သမားတော်ကြီး များကြပြန်တော့ လူနာတစ်ယောက် အိမ်ကို သွားကြည့်ရင် ဘာဆေးဝါးမှ မပါလည်း မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတဲ့၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်၊ ငရုပ်သီး၊ နနွင်း၊ ငပိ အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေရယ်၊ အိမ်ဘေးနားမှာ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ အပင်တွေနဲ့ဘဲ ဆေးကုပြီး လူနာကို ကျန်းမာ လာအောင် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် မွေးချိန်မသိဘဲ ဗေဒင်ဟောပြောနိုင်တဲ့ ဟူးရားဗေဒင် ပညာဟာ မြန်မာသမားတော်ကြီးများရဲ့ မြန်မာ့ဆေးပညာ နဲ့ အသွင်တူပါတယ်။ ရောက်ရာ နေရာမှာ အချိန်နာရီ သိရုံနဲ့ ဟောပြောနိုင်ပါတယ်။
ဟူးရားဗေဒင်ပညာရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ မေးခွန်းတွေကို တိတိကျကျဖြေဆိုနိုင်ခြင်းပါဘဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဒီနှစ် နိုင်ငံခြားကို သွားရမလား၊ မသွားရဘူးလားဆိုတာ သူ့ရဲ့(မွေးချိန်နာရီနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့) မူလဇာတာခွင်ကို ကြည့်ပြီး ဟောရရင် တိတိကျကျအဖြေထွက်ဖို့ ခက်ခဲချင် ခက်ခဲနေပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ဟူးရားဗေဒင်ကျတော့ ဒီနှစ်ထဲ ထွက်ရမယ်၊ မထွက်ရဘူးဆိုတာကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပြောနိုင်ပြီး ဘယ်လပိုင်းမှာ ထွက်ရမယ် ဆိုတာပါ တိတိကျကျ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဟူးရားဗေဒင်ထဲမှာ အဆင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကေပီ K.P စနစ်ကျတော့ ထွက်ရမယ့်နေ့၊ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရမယ့် အချိန်ထိ အောင် ဟောပြော နိုင်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ လက်ရှိအချိန်ကို ဇာတာဖွဲ့ပြီး ဟောတဲ့ ဟူးရားဗေဒင်စနစ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရောက်လာတဲ့ နည်းပညာပါ။ ခရစ်ရှနားမူရ်တီးရဲ့ ကေပီ K.P စနစ်ဟာဆိုရင်လည်း အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းမှာ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ပညာတစ်ခုပါ။ ဆရာကြီး “ခရစ္စနားမူးရ်တီး ပဒ္ဓတိ” ဆိုတဲ့ ပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးက မူလစနစ်ဟောင်း ဟူးရားဗေဒင်ပေါ်မှာ ထပ်ဆင့်ပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ပညာဖြစ်ပါတယ်။
= ဒီတော့ မေးခွန်းတစ်ခု ထုတ်ကြည့်ကြရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော မြန်မာ့ပညာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ဟူးရားဗေဒင်မျိုး မရှိဘူးလားလို့။
ရှိသမှ သိပ်ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “အင်္ဂဝိဇ္ဇာ” လို့ လူသိများတဲ့ ပညာဟာ ဟူးရားဗေဒင် စစ်စစ်ပါဘဲ။ ဗေဒင်ပညာနဲ့ အကျွမ်းတဝင် မရှိသူတွေကတော့ “အင်္ဂဝိဇ္ဇာ” ဆိုတာ အင်္ဂရုပ်ကိုကြည့်ပြီး ဟောတဲ့ ပညာတစ်မျိုးလို့ ထင်တတ် ကြတယ်။ အမှန်က အင်္ဂရုပ်ကို ကြည့်ပြီးဟောတဲ့ ပညာဟာ “အင်္ဂရုပ်ပညာ” သာဖြစ်ပါတယ်။
“အင်္ဂဝိဇ္ဇာ” ပညာကျတော့ တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန် (၂၄)နာရီကို နေ့ နဲ့ ည (၂) နှစ်ပိုင်း ပိုင်းလိုက်ပြီး တစ်ပိုင်းကို အခါ (၈)ခါ ခွဲလိုက်ရင် အချိန်တစ်ချိန်ကို (၁)နာရီခွဲရပါတယ်။ အဲဒီ တစ်နာရီခွဲ အချိန်မှာရောက်နေတဲ့ ဂြိုဟ်ကို “ဆပွတ်” တိုင်ထူပြီး ဟောပြောတာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာ ပညာဖြစ်ပါတယ်။ “တောင်တွင်း အကျော် ခင်ကြီးဖျော်” လို့ခေါ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး တီထွင်ခဲ့တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆရာတော်ကြီးဟာ သူမသိ၊ မတတ်တဲ့ ပညာဟူ၍ လုံးဝမရှိတဲ့အတွက် “မ,တစ်လုံးကြေ” ဆရာတော် လို့လည်း နာမည် တွင်ပါတယ်။
အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာလေးကို လိုက်စားမိပုံလည်း ပြောပြရဦးမယ်။ ကျွန်တောဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဗေဒင်ပညာကို လိုက်စား နေသူဖြစ်တော့ ရောက်လေရာ အရပ်မှာ မျက်နှာပွင့်ပါတယ်။ တွေ့တဲ့လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အခက်အခဲ လေးတွေကို မေးချင်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် တတ်မြောက် ထားတာက သင်္ချာဗေဒ နဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင် ဖြစ်တော့ မွေးရက်၊လ၊ ခုနှစ် မသိသူ တွေနဲ့ တွေ့ရင် ကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်တော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ ဟူးရားဗေဒင်ကို ဆက်လေ့လာဖြစ်တယ်။
ဟူးရားဗေဒင်က အခုရက်ပိုင်းမှာ ဘယ်ဂြိုဟ်တွေ ဘယ်ရာသီခွင်မှာ ရှိနေလဲဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ အလွတ် မှတ်ထားပြီး မေးတဲ့လူတွေ့ရင် အဲဒီအချိန်ကို လဂ်အကြမ်းကောက်ပြီးထည့်လိုက်ရင် ဇာတာခွင် တစ်ခုရပါတယ်။ တခါတလေလည်း အချိန်နဲ့ လဂ်ကို မကောက်ချင်ရင် မေးတဲ့သူကို (၁) ကနေ (၁ဝ၈) အတွင်းက ဂဏန်းတစ်လုံးကို မေးပြီး ဂဏန်းနံပါတ်နဲ့ လဂ်တပ်လိုက်ရင်လည်း မှန်တာပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် ဟူးရားဗေဒင် မှာလည်း ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဒီဂရီအံသာတွေကို မှတ်ရတာတစ်မျိုး၊ လဂ်ကောက်ရတာတစ်မျိုး၊ ဇာတာရလာတော့လည်း ချက်ခြင်း မပြောနိုင်သေးဘဲ ဇာတာခွင်ကို အချိန်ယူကြည့်ရတာတစ်မျိုးနဲ့ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် ဒီထက်လွယ်တဲ့ နည်းများရှိသေးလားဆိုပြီး ရှာကြည့်တော့ “အင်္ဂဝိဇ္ဇာ” ကို သွားတွေ့ပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အစကတော့ သိပ်အထင်မကြီးလှဘူး။ ဇာတာမရှိတဲ့အချိန်၊ ဂြိုဟ်တွေကို အလွတ်မရတဲ့အချိန်မှာ ပြောနိုင်အောင်သာ “တစ်ပွဲတိုး” အနေနဲ့ ဆောင်ထားတာမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာရင်း ဟောပြောရင်းနဲ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကို အထင်ကြီးလာပါတယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာထဲမှာလည်း မြုတ်ကွက်တွေက အများသားလား။ ကျွန်တော်ကလည်း နဂိုကတည်းက သုတေသနဝါသနာပါသူဆိုတော့ ဒီမြုတ်ကွက်တွေကို ဖော်ကြည့်တယ်။ မြုတ်ကွက် တစ်ခု တွေ့လာလေ၊ အထင်ကြီးလာလေဖြစ်ပြီး အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာဟာ ကျွန်တော့အတွက် “ဖေးဘရိတ်” ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
မြန်မာ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာဟာ ယှဉ်ပြီးပြောရရင် ဇာတာဖွဲ့ပြီး ဟောရတဲ့ အရှေ့တိုင်း(အိန္ဒိယ)ဟူးရားဗေဒင်တို့၊ ခရစ်ရှနားမူရ်တီးရဲ့ ကေပီစနစ်၊ အနောက်တိုင်း ဟူးရားဗေဒင်တို့ထက် ပိုပြီး အားသာချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း ဟူးရားဗေဒင်မှန်သမျှ (သံဒိဋ္ဌပြက္ခဒိန်) လို့ခေါ်တဲ့ ဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန်စာအုပ်တွေ နဲ့ ဘာဝစက် ကောက်ကိန်း စာအုပ်တွေရှိမှ တွက်လို့ချက်လို့ ရတာပါ။
ပြီးတော့ အချိန်လည်း အကြာကြီး ယူရပါသေးတယ်။ ကေပီ K.P စနစ်ဆိုရင် (ကွန်ပျူတာဇာတာ ပရိုဂရမ်တွေမပေါ်ခင်က) ဇာတာတစ်စောင်ထွက်ဖို့ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီ အချိန်ယူရပါတယ်။ တွက်ချက်မှု တွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ်။ တွက်ချက်မှုမှားရင် အဖြေလည်း မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတွေ ပေါ်လာပြန်တော့ လည်း ကိုယ့်အနားမှာ ကွန်ပျူတာမရှိရင် အလုပ်လုပ်လို့ မရပြန်ပါဘူး။
မြန်မာ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကျတော့ ဘာ သံဒိဋ္ဌ နဲ့ ကောက်ကိန်းစာအုပ်မှ မလိုပါဘူး။ နာရီလေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး၊ “သူရဇ္ဇ၊ သောကြ၊ ဗုဒ္ဓ၊ စနြေ္ဒာ၊ သောရီ၊ ဂုရု၊ ဘောမ” ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးအတိုင်း တိုင်ထူလိုက်ရင် ခဲတံ၊ ဘောပင်၊ စာရွက်တောင်မလိုဘဲ စိတ်တွက်နဲ့တွင် ဟောလို့ရပါတယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာ ပညာရှင်တွေဟာ ခဲတံ၊ ဘောပင်၊ စာရွက်တောင် မသုံးကြဘဲ အလွတ်ပြောနေကြလို့ တစ်ချို့က အကြားအမြင်ပညာနဲ့ အထင်မှားတတ် ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ချို့က လူရဲ့ အင်္ဂရုပ်ကို ကြည့်ပြီး ပြောနေတယ်ထင်လို့ “အင်္ဂဝိဇ္ဇာ” လို့ နာမည်တပ်ကြတာ ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာမှ မတွက်ချက်ဘဲ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာနဲ့ လက်တန်းထိုး အလွတ်ပြောနိုင်လာတော့ တစ်ချိန်တုန်းက ကေပီ K.Pစနစ်နဲ့ အချိန်နာရီပေါင်းများစွာ ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ တွက်ချက်ခဲ့ရတာ တွေကို ပြန်အမှတ်ရလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာ့ဆေးပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ “မကွေးဝင်းမြင့်” ရဲ့ စကားတစ်ခုကို အမှတ်ရမိ ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ “သမားဖျင်းလျှင်၊ ပုလင်းများ” ၏ တဲ့။ အတော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ စကားပါ။ မြန်မာသမားတော် တစ်ယောက် တော်မတော်၊ တတ်မတတ်ဆိုတာ သူသုံးတဲ့ ဆေးပုလင်းတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ခပ်ဖျင်းဖျင်း ဆိုရင်တော့ အသင့်ဖော်စပ်ပြီး ဆေးတွေကို များများ သုံးရ ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပုလင်းတွေ သိပ်များနေရပါသတဲ့။
ထူးချွန်တဲ့ သမားတော်များကြပြန်တော့ ကိုယ့်အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ သဘာဝသစ်သီးသစ်ရွက်၊ သစ်ဥသစ်ဖု၊ အရာဝတ္တုတွေကို သုံးပြီး ဆေးကုနိုင်ကြပါတယ်တဲ့။ အရေးကြီးတဲ့ သက်စောင့်ဆေး(၄)မျိုး(၅)မျိုးလောက်သာ ဆောင်ထားတတ်ကြပြီး ကျန်တဲ့ အပိုင်းကတော့ လူမမာအိမ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆေးကုနိုင်ကြပါတယ်တဲ့။
ဒီလိုပါဘဲ။ ထူးချွန်တဲ့ မြန်မာ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာရှင်တွေဟာ ဘာစာအုပ်၊ ဘောပင်မှ မဆောင်တော့ပါဘူး။ နာရီကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်ပြီး လျှပ်တပြက် မိနစ်၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ အဖြေကို ချက်ခြင်း ထုတ်နိုင်ကြပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ရာနှုံးမှလည်း ကေပီ K.Pစနစ်တို့နဲ့ ယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ကေပီ စနစ်သမားတွေက မေးချင်မေးလိမ့်မယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာဟာ ကေပီလိုတော့ မိနစ်၊ စက္ကန့်ပိုင်းအထိ မတွက်ချက်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောချင် ပြောကြမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မူလ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကျမ်းတွေမှာတော့ မပါရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ ကေပီစနစ်ကို လေ့လာကျွမ်းဝင်ခဲ့သူမို့ မြန်မာ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာကိုလည်း၊ အချိန် တစ်နာရီခွဲ ထဲမှာ ဘုတ္တိတိုင်တွေထပ်ခွဲ၊ ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ် နဲ့ စိုးမိုးဂြိုဟ် တွေရှာပြီး နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် အထိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့ အခါမှာ ကေပီ K.Pစနစ်လိုဘဲ အချိန်အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ နည်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ လာရပါတော့တယ်။
လွယ်လွယ်တော့ ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှာဖွေသုတေသနပြုပြီးမှ ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးရထားဘယ်အချိန် ဆိုက်မလဲ၊ ကလေးကျောင်းက ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ စတဲ့ ကေပီ K.P စနစ်က မိနစ်၊ စက္ကန့် အတိအကျ တွက်ချက်တဲ့ နည်းတွေကို အင်္ဂဝိဇ္ဇာနဲ့ တွက်ချက်လာနိုင်ပါတော့မယ်။ ဘာဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန်၊ ဘာဝကောက်ကိန်း မှလည်း မလိုတော့ပါဘူး။
အခုတော့ ကျွန်တော်နားလည်လာတာက မဟာဘုတ် နဲ့ အင်္ဂဝိဇ္ဇာပညာတွေကို အထင်သေးနေတဲ့သူတွေဟာ ဒီပညာတွေကို နက်နက်နဲနဲ မလေ့လာဘူး သူတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နာမည်ကျော် သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောဘူးပါတယ်။ စက်ပစ္စည်း နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အလုပ် ပြီးမြောက် မှုခြင်း တူတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းကို ပိုပြီး ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်လေ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေ လို့ ပြောရမှာပါတဲ့။
ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာ့နည်းပညာတွေဟာ ကမ္ဘာ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း နိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြချင်တာရယ်၊ အချို့သော နက္ခတ်ဗေဒင် နဲ့ K.P ပညာရှင်တွေဟာ အင်္ဂဝိဇ္ဇာကို အထင်ကြီး လေးစားရကောင်းမှန်း မသိကြတာရယ်ကြောင့် ရယ်ပါ။ ကျွန်တော် တီထွင်ထားတဲ့ (ကေပီ K.Pစနစ် နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့) ကေပီ စနစ် နဲ့ မဟာကာလကြီး ဗေဒင်ပညာ နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ “ဟူးရား-မဟာကာလကြီးဗေဒင်ပညာ” ကိုလည်း အပြောမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့သက်သေပြနိုင်ဖို့ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပြီး ဗေဒင် ဝါသနာအိုးများ (အထူးသဖြင့် လက်ဆန်းဗေဒင် ဝါသနာပညာရှင်များ) စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါလို့။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged Horary Astrology, hura veda, Myanmar Astrology, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |2Comments	# နက္ခတ္တပညာ နှင့် နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာPublished January 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
နက္ခတ္တပညာ(Astronomy) နဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ(Astrology) တို့ဟာ (မြန်မာရော/ အင်္ဂလိပ်ပါ) နာမည်ခြင်း ခပ်ဆင်ဆင်တူကြပေမယ့် မတူညီဘဲ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ပညာရပ် နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော် များများဟာ ဒီကွဲပြားခြားနားမှု ကို မသိကြပါဘူး။ အတော်များများ ကတော့ အတူတူလို့ဘဲ ထင်ကြပါတယ်။ တူတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် လည်း ဆင်တူတဲ့ အချက်တွေက တော်တော်များပါတယ်။ ဂြိုဟ်တွေ နက္ခတ်တွေကို လေ့လာမှုတွေ၊ ရာသီခွင်တွေ ၊ နေကြတ်တာတွေ၊ လကြတ် တာတွေကို ပြောဆို ရေးသားကြတာတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီကြသလိုပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မတူညီကြပါဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခု ခြင်းစီအပေါ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (Definition) အရ ပြောရရင် ဒီပညာနှစ်ခုဟာ လုံးဝ မတူညီကြပါဘူး။ အဘိဓါန်တွေမှာ နက္ခတ္တပညာ (Astronomy) ကို Scientific Study of Universe လို့သတ်မှတ်ပြီး နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ (Astrology) ကိုတော့ Study of Relation Between Planets and Human Affairs လို့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး မပါပါဘူး။
နက္ခတ္တပညာဆိုတာ “သိပ္ပံပညာစစ်စစ်” ဖြစ်ပါတယ်။ Science လို့ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံပညာ စစ်စစ်ပါ။ သိပ္ပံပညာ ဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက် တွေအပေါ်မှာသာ အခြေပြုရပါတယ်။ သိပ္ပံပညာမှာ “သီအိုရီ” လို့ ခေါ်တဲ့ ဥပဒေသတွေ ဆိုတာလည်း အမြဲတန်းမှန်ကန်နေရပါတယ်။ မှန်တဲ့အခါမှန်လိုက်၊ မှားတဲ့ အခါမှားလိုက် မဖြစ်ရပါဘူး။
Posted in နက္ခတ်ဗေဒင် | Tagged astrtology & astronomy, Myanmar Astrology, နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ နှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာ |2Comments	# မဟာဘုတ်ပညာ၊ ပက္ခတ် နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးPublished January 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုး (ဟိန္ဒူ) တွေဟာ အိမ်ထောင်ကွဲမှု အနည်းဆုံးဘဲတဲ့။ (ဟို တုန်းကပါ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၅ဝ) ဟိုဘက်လောက်ကပါ) အခုတော့ သူတို့လည်း ကမ္ဘာနဲ့အမှီရင်ဘောင်တန်း လာကြပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကွဲမှု တွေများလာကြပါပြီ။
ဟိုတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အဓိကလူမျိုးကြီး (၂) ခုမှာ အိမ်ထောင်ကွဲမှု ဘာကြောင့် ဒီလောက် နည်းရတာလည်းဆိုတာကို လေ့လာ ကြည့်တော့ သူတို့ လူမျိုးတွေမှာ အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင် “သေတပန် သက်တဆုံး” ပေါင်းသင်းသွားကြရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း တစ်ခုအဖြစ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံယူခဲ့ ကြတာက အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး နောက်ကွယ်ကနေ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ လူမျိုးကြီး (၂) မျိုးဟာ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ နေရာမှာ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ဇာတာခြင်း တိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီး “တည့်တယ်” ဆိုမှ အိမ်ထောင်ချပေးလေ့ရှိကြတာ အတော်များပါတယ်။ တရုတ် လူမျိုးတွေဆိုရင် သူတို့မွေးဖွားတဲ့နှစ် အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျားနှစ်၊ နွားနှစ်၊ နဂါးနှစ်၊ မြွေနှစ်၊ ဆိတ်နှစ် စသည်ဖြင့် ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဘာနေ့သားလဲဆိုတာ မြန်မာတိုင်း သိကြသလို၊ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာလည်း ငါ ဘာအကောင်ဖွားဆိုတာ တရုတ်တိုင်း သိကြပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို အိမ်ထောင်ချ ပေးတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ တစ်ဖက်က ယောင်္ကျား လေး(သို့) မိန်းကလေးဟာ ဘာအကောင်ဖွားလည်း ဆိုတာကို အရင်ဆုံး လေ့လာကြပါတယ်။ အကောင်ခြင်းမတည့်လို့ ကတော့ ပေးစား တယ်ဆိုတာ ဟိုဘက်ခေတ်တွေတုန်းက မရှိသလောက် ပါဘဲ။ အနည်းဆုံး တရုပ်မိဘ (၉ဝ) % လောက်ကတော့ မိန်းကလေးနဲ့ ယောင်္ကျားလေး အကောင်ခြင်း တည့်/မတည့် မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အိမ်ထောင်ချ ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 13 Comments	# အင်္ဂါဂြိုဟ် နှင့် အိမ်ထောင်ရေးPublished January 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာစကားပုံ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ” အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုး၊ ဤ သုံးခု ချက်မပိုင်လျှင်၊ နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့်အမျိုး” တဲ့။ ဆိုလိုတာက အိမ်ထောင်ပြုတာရယ်၊ ဘုရားတည်တာရယ်၊ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးတာရယ်၊ ဒီ (၃)ခုဟာ စ, မိပြီဆိုရင် နောက်နောင်အခါမှာ ပြန်ပြင်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်တဲ့။ လက်တွေ့ မှာကော ဟုတ်ပါရဲ့လား။
ဟိုး ယခင့်ယခင် အခါတုန်းကတော့ ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ဒီခေတ် အခါမှာတော့ ဒီစကားပုံဟာ မှန်သင့် သလောက် မမှန်နိုင်တော့ပါဘူး။ ရှေးခေတ်အခါတွေကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုပြုပြီးပြီ ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေသည် ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေ သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး ပေါင်းသင်း သွားကြတာဘဲ များပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ အဆင် မပြေကြရုံ နဲ့တော့ ကွဲကြ ပြဲကြသည်အထိ မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဘိုးအဘွားတွေ ခေတ်ကပေါ့။
ဒီဘက်ခေတ် မှာတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုပြုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြုလိုက် ကြသလို အဆင်မပြေကြရင်လည်း လွယ်လွယ် နဲ့ဘဲ ကွဲလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ များသည်ထက် များလာတာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ ဒီခေတ် လူငယ်တွေ ဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စကို သိပ်ပြီး အလေး အနက်မထားကြတော့ပါဘူး။ “ဝမ်းဂိုး၊ တူးကမ်း” ဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်လာကြပါပြီ။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, Myanmar Astrology, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |7Comments	# ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ (၁)Published January 26, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးတဲ့နေ့ကိုတော့ လုံးဝ မမေ့တဲ့ အကြောင်း၊ ကိုယ်ဘာနေ့ သားသမီးလဲဆိုတာ ချက်ခြင်းပြောနိုင်တဲ့ အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့လေးက ကိုယ် ဘာ”အဖွား” လဲ ဆိုတာကိုလည်း မြန်မာလူမျိုး တော်တော် များများ သိကြပါတယ်။
ရှေးခေတ်တုန်းကဆိုရင် ကလေးတစ်ဦး လူ့လောကထဲကို မွေးဖွား ဝင်ရောက် လာပြီ ဆိုတာနဲ့ အမည်နာမ တစ်ခုကို ပေးကြတဲ့နေရာမှာ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး များဆီမှာ အပ်နှံပြီး နာမည် ပေးခိုင်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာ ဆိုတာ မျိုးကလည်း လူ့လောကီကိစ္စတွေကို လုံးဝ ကင်းကွာ လို့မရတော့ ဗေဒင်လေး၊ ဘာလေးတော့ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို လေ့လာ ထားကြရပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ လွယ်လည်း လွယ်ကူ၊ အသုံးလည်း တည့်တဲ့ “မဟာဘုတ်” ကိုတော့ ရဟန်းသံဃာတိုင်း လိုလို အနည်းနဲ့ အများတော့ သိကြပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ဒကာရဲ့ သားသမီးဖြစ်တော့ မဟာဘုတ်ကလေးကောက်တွက်၊ ပြီးတော့ နာမည် ပေးလိုက်ကြတာပေါ့။ နာမည်ပေးပြီးတာနဲ့ ဒီကလေးက “အထွန်းဖွား၊ ရာဇဖွား၊ ပုတိဖွား” စသည်ဖြင့် တွက်ချက်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီကလေး တွေဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ၊ ကိုယ်ဘာနေ့သား၊ ဘာနေ့ဖွားဆိုတာကို သေသေချာချာ မှတ်သား ထားလိုက် ကြတာပေါ့။
ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့ မိဘတွေကျတော့ နာမည်ပေးတာကိုလည်း ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းမကျမချင်း ပေးချင်သလို ပေးကြ၊ ခေတ်အဆန်ဆုံး ပေးကြ ပေမယ့် ကလေးက “ဘာအဖွား” လည်းဆိုတာကိုတော့ မသိကြတော့ပါဘူး။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ပုတိ, ဘင်္ဂ, မရဏ, မရဏ (၁), မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Leaveacomment	# ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ (၂)Published January 22, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ ဆိုတာ မဟာဘုတ်ခွင်မှာ အောက်တန်းဖွားတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အနိဋ္ဌ ခွင်ဖွား တွေလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ အဖွားတွေဟာ လူခြင်းယှဉ်ရင် တပန်းရှုံးသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာ မတောက်တခေါက် လေ့လာဖူးတဲ့သူဆိုရင် ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ ဆိုရင် အညံ့ဖွားဘဲ။ “ပုတိ သဘောမကျော်စော၊ နှမြောတွန့်တို ရှိလှ၏” ဆိုတာမျိုး၊ “မရဏဖွားဆိုရင် မွေးစမှာ ချုချာပြီး သေရင်သေ၊ မသေရင်ကောင်းစားမယ်” တဲ့။ “ဘင်္ဂ” ဆိုရင် မိဘတွေနဲ့ သေကွဲရှင်ကွဲ ကွဲရ တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကတဖုံ အမျိုးမျိုးပြောနေ ကြတာပါဘဲ။
စာရေးသူကတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့သုတေသနပြုရမှ ကျေနပ်အားရ တဲ့သူမို့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂ဝ)လောက် ကတည်းက ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ ဖွားတွေနဲ့ ကျန်အဖွားတွေနဲ့ ကွာခြားမှုကို လေ့လာ ကြည့်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် တွေ ကိုပါ ရှာဖွေပြီး လေ့လာကြည့်တယ်။
အဲဒီမှာ ဘာသွားတွေ့တုန်းဆိုတော့ ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ ဖွားတွေဟာ အထက်တန်းဖွားလို့ခေါ်တဲ့ အထွန်း , သိုက် , ရာဇ နဲ့ အဓိပတိတို့ထက် ပိုပြီး ညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ လုံးဝမှားယွင်းပါတယ်။ ရာခိုင်နှုံးအရ ပြောရရင် ပုတိ , ဘင်္ဂ , မရဏ ဆိုတဲ့ အောက်တန်းဖွားတွေနဲ့ အထွန်း , သိုက် , ရာဇ နဲ့ အဓိပတိ ဆိုတဲ့ အထက်တန်းဖွားတွေရဲ့ အောင်မြင်မှု ကျော်ကြားမှုတွေဟာ (၅ဝ%=၅ဝ%) စီလောက်ပါဘဲ။ အထက်တန်းဖွားတွေက ပိုထူးချွန်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ပုတိ, ဘင်္ဂ, မရဏ, မရဏ (၂), မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	# ခင်ဗျား ဘာနေ့သားလဲPublished December 27, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
“ဟဲ့ – ဘာနေ့သားလေးလဲဟဲ့၊ သောကြာသားလေးလား၊ ကောင်းတယ်ဟဲ့၊ “သားဦး သောကြာ ပဒေသာ” တဲ့၊ မိဘတွေကံ ကောင်းတာပေါ့ဟယ်” စသည်ဖြင့် မှတ်ချက်ပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ (ရက်, လ , ခုနှစ်) ကိုသာ မေ့ချင်မေ့မယ်။ ကိုယ်ဘာနေ့ သားသမီးဆိုတာကိုတော့ သေတဲ့အထိ မှတ်မိကြပါတယ်။
“ခင်ဗျား ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာ မွေးတာလဲ” လို့ကောက်ခါငင်ကာ မေးလိုက်ရင် ချက်ခြင်းပြန်ဖြေဖို့ အချိန်ယူရပေမယ့် “ခင်ဗျား ဘာနေ့သားလဲလို့ မေးကြည့်ရင်တော့ – ကျွန်တော်လား ? အင်္ဂါသားလေ (ဒါမှမဟုတ်) ဗုဒ္ဓဟူးသားဗျ လို့ ချက်ခြင်း မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေကြပါလိမ့်မယ်” ။
နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို ခင်ဗျား ဘာနေ့သားလဲလို့ မေးကြည့်ပါလား။ ပြန်ဖြေနိုင်သူ အတော် ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးနေ့ကို (ရက် , လ , ခုနှစ်) နဲ့ မှတ်သားထားတတ်ကြပေမယ့် “နေ့” အနေနဲ့ မှတ်သားတတ်ကြတဲ့ အလေ့အထ မရှိကြလို့ပါဘဲ။ သူများတွေမှာ မရှိတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေက ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာဟာ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခု မဟုတ်ပါလားဗျာ။
ကျွန်တော်ဟာ ဗေဒင်ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုတဲ့အခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ မွေးနေ့တွေကို စုဆောင်းတဲ့ နေရာမှာ ရက် , လ , ခုနှစ် ကိုသာ ရရှိပြီး နေ့ကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ရှာယူရပါတယ်။ ဘာနေ့သား သမီးဆိုတာကိုတော့ ဖော်ပြလေ့မရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာနေ့သားသမီးမှန်း မသိဘဲ နေသွား , သေသွား ကြသူတွေအများကြီးရှိမှာဘဲလို့ (ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေက လွဲရင်ပေါ့လေ)။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဓလေ့က ချစ်စရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဂုဏ်ယူစရာ မကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ကိုယ်ဘာနေ့သားသမီးဆိုတာကို မလွဲတမ်းမှတ်ထားနိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးအတော် များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက်၊ လ၊ ခုနှစ် ကိုတော့ တိတိကျကျမှတ်သားထားတဲ့သူ အလွန်နည်းခဲ့ကြပါတယ်။ “နည်းခဲ့ကြပါတယ်” လို့ ပြောတာက ဟိုတုန်းကနည်းခဲ့ပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ တော်တော်လေး တိတိကျကျ မှတ်သားလာကြပါပြီ။
ဟိုတုန်းခေတ်အခါများဆီ ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ(အထူးသဖြင့် ကျေးလက်တောရွာနေသူများ)ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက်၊ မွေးလ၊ မွေးခုနှစ်ကို တိတိကျကျ မှတ်သားထားကြသူ အလွန်နည်းခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ်မွေးတဲ့ခုနှစ်ကို သေသေ ချာချာ မမှတ်မိတော့လို့ ကိုယ့်အသက် ဘယ်လောက်ရှိမှန်းတောင် တိတိကျကျမသိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ တောအရပ်ဒေသ မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသူမို့ ဒီအချက်ကို တော်တော့်ကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဂျပန်တက်တုန်းက မွေးတာတို့၊ တော်လှန်ရေး အစိုးရ တက်တုန်းက မွေးတာတို့၊ ရွာမှာ ရေတွေအရမ်းကြီးတုန်းက မွေးတာပေါ့ တို့လို မရေမရာတွေက အများကြီးဗျ။
မွေးလ , ကျပြန်တော့လည်း မြန်မာသက္ကရာဇ်နဲ့ဘဲ မှတ်သား လေ့ရှိကြတာမို့ လဆန်း နဲ့ လဆုတ် မကွဲပြားသူ တွေကလည်း အများကြီးပါ။ ဗေဒင်မေးဖို့ရောက်လာရင် ပြောလိုက်တော့ ကြာသပတေးသား၊ နှစ်တရာပြက္ခဒိန်ထဲမှာ သူပြောတဲ့ နေ့ရက်လနဲ့ တိုက်ကြည့်တော့ စနေနေ့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဗေဒင်ပညာလေ့လာလိုက်စားပြီး ဗေဒင် အပျော်တမ်း ဟောဘူးတဲ့သူတိုင်း ကြုံဘူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မှားစရာရှိရင် ရက် , လ , နှစ် တို့သာ မှားချင်မှားဖို့ ရှိပြီး နေ့ကတော့ မမှားကြဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် နေ့ကို မူသေထားပြီး ဘယ်ရက်ဘယ်လ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လဆန်းမဟုတ်ဘဲ လဆုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ စသည်ဖြင့် ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်လုပ်ကြရတော့တာပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မွေးနေ့ကို ရှာရတာ ဟာ (လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅ဝဝ လောက်က ဖြစ်ရင်တောင်မှ) အင်မတန်လွယ်ကူသလောက် မြန်မာနိုင်ငံထဲက ကျော်ကြားသူတွေ ရဲ့ မွေးနေ့ကို ရှာရတာ အင်မတန် ခက်ခဲလှတဲ့ အဖြစ်ကိုပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့ သုတေသန အရာမှာ အင်မတန် အားနည်းကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၅ဝဝ) လောက်ကို မပြောနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်(၅ဝ)လောက်တုန်းက လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဂီတစာဆို တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကိုတောင်မှ ရှာလို့မလွယ်လှပါဘူး။ တွေ့ပြန်တော့လည်း အထက်ကပြောခဲ့သလို နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန်နဲ့ တိုက်ကြည့်ရင် အလွဲလွဲ အမှားအမှားဖြစ်နေပြန်ရော။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာကျော်ပြဇာတ်စာရေးဆရာကြီး ဝီလျံရှိတ်စပီးယား ကွယ်လွန်ခဲ့တာ အခုဆို နှစ်ပေါင်း (၄ဝဝ) ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ အကြောင်းဘာသိချင်လဲ။ အကုန်သိလို့ရနိုင်တယ်။ မွေးနေ့လား ? (၁၅၆၄ခု ဧပြီလ ၂၆ရက်)။ အနိစ္စရောက်တဲ့နေ့လား ? (၁၆၁၆ခု ဧပြီလ ၂၃ရက်)။ ပြဇာတ်ဘယ်နှစ်ပုဒ်ရေးခဲ့လဲ။ အဲဒီ ပြဇာတ်တွေကို ဖတ်ချင်လား။ အကုန်ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ အထုပ္ပတ္တိ ကကော။ အားလုံးအပြည့်အစုံဘဲ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကလစ်တစ်ချက် ခေါက်ရုံနဲ့ အကုန် သိနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ့စာပေသမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ “မြဝတီမင်းကြီးဦးစ” တို့။ “နတ်ရှင်နောင်” တို့။ အမတ်ကြီး “အနန္တသူရိယ”တို့။ သူတို့တစ်တွေ ရဲ့ မွေးနေ့တွေ။ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေ။ အထုပ္ပတ္တိတွေ။ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေ။ ရှိကောင်း ရှိပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာရပါမယ်။ မရှိဖို့ နဲ့ ရှိပြန်ရင်လည်း အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်နေဖို့ ပိုများပါတယ်။ သမိုင်းအမွေအနှစ် ကို တန်ဖိုးထားတတ်သူ တွေအတွက်တော့ အင်မတန် နှမြောစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
မြဝတီမင်းကြီးတို့၊ နတ်ရှင်နောင် တို့ဟာ ရှိတ်စပီးယားထက် အများကြီးနောက်ကျပြီးမှ မွေးလာခဲ့တာပါ။ အလွန်ဆုံးရှိလှရင် နှစ် (၂ဝဝ)ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့အကြောင်းတွေကို နောင်လာ နောက်သားတွေ သိဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာကို သူတို့နာမည်တွေကို မကြားဘူးတဲ့ လူငယ်တွေ တော်တော်များမယ် ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂ဝဝ)အတွင်းလောက်က ကျော်ကြားခဲ့သူတွေကို မပြောပါနဲ့ဦး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၅ဝ)လောက်က ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ အထုပ္ပတ္တိကိုတောင် ရှာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ရှာဖွေ စုဆောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ကုန်းဘောင်ခေတ် ကစပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းလောက်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သူ တွေရဲ့ အထုပ္ပတ္တိ တွေကို စုဆောင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမျိုးကျတော့ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်မှ ရပါလိမ့်မယ်။ သမိုင်း အရှာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပြီး ငွေကြေး အထောက် အပံ့ပါ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးကိစ္စမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုဟာ အတော်အရေးပါ ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကိုယ်ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်အရ ပြောနေပေမယ့် တစ်ချို့သူတွေအတွက်တော့ အရေးမပါတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေ မလားမသိဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ ဗေဒင်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ နာမည်ကျော်တွေရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ အထုပ္ပတ္တိ တွေကို ရှာဖွေ ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း အမြဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုကို ကောက်ရေးလိုက်တာပါ။ သူများနိုင်ငံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ရှာဖွေရတာ လွယ်သလောက် ကိုယ့်နိုင်ငံက လူတော်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ရှာရခက်လွန်းလို့ ရေးမိလိုက်တဲ့ စာတပုဒ်ပါ။
သမိုင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့ မှတ်တမ်းပါ။ လူတွေရဲ့ မှတ်တမ်းမရှိရင် သမိုင်းဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ သမိုင်းကို တန်ဖိုး ထားတတ်မယ် ဆိုရင် လူတွေရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း တန်ဖိုးထားရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် လူတော်လူကောင်း တွေ၊ ပါရမီရှင် တွေ၊ လူ့လောကကို တည်ဆောက်သွားတဲ့သူတွေ၊ အကြင်နာ မေတ္တာတရားကြီးမားလွန်းသူတွေ၊ အနစ်နာခံခဲ့ သူတွေ၊ စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေ၊ စွန့်စားခဲ့သူတွေ —- သူတို့တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိခဲ့ကြသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာနည်းပါးမှု၊ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်း နည်းပါးမှုတို့ကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ လူတော် လူကောင်းတွေ ရဲ့ အကြောင်းကို နောင်လာနောက်သားတွေ သိပ်မသိကြဘူးဖြစ်နေကြတာပါ။
မာသာထရီဇာကို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိခဲ့လား။ ရှိတာပေါ့။ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရပ်သာကို တည်ထောင်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အဘိုးအဘွား တွေကို ပြုစုခဲ့တဲ့ ဒေါ်ဦးဇွန်း။ ကိုင်ရို လို ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဗေဒင်ပညာရှင်မျိုးရှိခဲ့လား။ ရှိတာပေါ့။ အတုလဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်။ အလက်ဇန်းဒါး သဂရိတ် လို အင်ပါယာကြီးတွေချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်တွေကော ရှိခဲ့လား။ ရှိတာပေါ။ ဘုရင့်နောင် နဲ့ အလောင်းဘုရား တို့ပေါ့။ တစ်ဦးချင်းထူးချွန်တဲ့ စစ်သူရဲကောင်းတွေကော ရှိခဲ့လား။ ရှိတာပေါ့။ နာမည်ကြီး တရုပ်သူရဲကောင်း “ဂါမဏိ” ကို စီးချင်းထိုးပြီး ခေါင်းဖြတ်ယူခဲ့တဲ့ “သမိန်ဗရမ်း” ဆိုတဲ့ မွန်မြန်မာ သူရဲကောင်းပေါ့။ ဖော်ထုတ်ရှာဖွေကြမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါ။ “ဂျော့ဘားနတ်ရှော” နဲ့ “အလက်ဇန်းဒါး ဒူးမား” တို့လို စာပေတွေကို ရေးနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာ ကြီးမျိုးရှိခဲ့လား။ ရှိတာပေါ့။ ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း၊ဆရာကြီး ဒဂုန်ရွှေမြှား၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၊ ပီမိုးနင်း အများကြီးပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့အစည်းမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ဘူးသူ ရှိရဲ့လား။ ရှိတာပေါ့။ မြန်မာ့ “ဦးသန့်” လေ။
ဒီလိုလူတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပြုစုပြီး စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းပေး သွားမယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ ………………. ။ တွေးကြည့်တာပါ။ ပို့စ် အသစ်တွေ မတင်တာကြပြီဖြစ်လို့ တောက်လျှောက် တင်သွားပါဦးမယ်။ နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း ဒီပို့စ် နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ “ပုတိ၊ ဘင်္ဂ၊ မရဏ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဆက်ပြီး တင်သွားပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအား အကူအညီ တောင်းခံလိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လွန်ခဲ့သော နှစ်တရာအတွင်း ကျော်ကြားခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ မွေးသက္ကရာဇ်များကို ကိုယ်တိုင် သိလျှင်သော်၎င်း၊ မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေရမည်ကို အကြံပေးနိုင်လျှင်သော်၎င်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါမည်။ ယခုလက်ရှိထင်ပေါ် ကျော်ကြားနေကြသူများ၏ မွေးနေ့များကိုလည်း သိရှိလိုပါသည်။ စာရေးသူထံတွင် ပုဂ္ဂိုလ် (၅၀၀)ကျော်ခန့် စုဆောင်း ထားရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း မစုံလင်သေးပါ။ အချို့မှာ လူတစ်ဦးတည်း မွေးသက္ကရာဇ် (၂)မျိုး (၃)မျိုး ဖြစ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အနုပညာလောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မွေးသက္ကရာဇ်များကို အရှာရခက်ပါသည်။ (များသော အားဖြင့် မင်းသမီးမင်းသား များသည် အသက်ကို ပုံမှန်ထက် ငယ်၍ ပြောတတ်ကြခြင်းကြောင့် အမှန်ရသူ နည်းလှပါသည်)
ယခု ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရသော ထင်ပေါ်ကျော်ကြား သူ တစ်ဦးဦး၏ မျိုးဆက်ဖြစ်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ၊ အားကစား၊ စာပေ၊ သိပ္ပံပညာ၊ ၀ိဇ္ဇာပညာ၊ ရဟန်း၊ ယောဂီ၊ မည်သည့် လောကမှ ဖြစ်စေ ရယူလိုပါသည်။ သိရှိသူများ ပေးပို့ပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ Comment ထဲတွင် ၀င်ရောက် ရေးသား ခဲ့စေလိုပါသည်။
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ခင်ဗျား ဘာနေ့သားလဲ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 12 Comments	# ဇမ္ဗူဒီပါ လက်ယာ တောင်ကျွန်း နိမိတ်ထွန်း၏Published November 21, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အယူတော်မင်္ဂလာ | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, အယူတော်မင်္ဂလာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 11 Comments	# ထီပေါက်တာ ကံကောင်းတာလား၊ ကံဆိုးတာလားPublished November 15, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ဒီလူ့နှယ် ဘယ်လိုပါလိမ့်။ “ဂေါက်” များ ဂေါက်နေသလား လို့ ထင်ချင်ထင်မိမယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ထီပေါက်ပါတယ်ဆိုမှ ကံကောင်းလို့ ပေါက်တာပေါ့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပင်ပင်ပန်းပန်းမရှာရဘဲ ဗြုန်းကနဲ ပိုက်ဆံတွေ သိန်း,သန်းချီပြီး ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်လာတာကိုမှ ကံကောင်းတာ မဟုတ်ရင် ဘယ်ဟာကို ကံကောင်းတာလို့ ဆိုကြမလဲ။ ဒီလိုဘဲ ပြောကြမှပေါ့။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်က ဒီလိုဘဲ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ထီဆုကြီးကြီး အရမ်းပေါက်ချင်လို့ ထီတွက်ကိန်း မျိုးစုံကို ဗေဒင်ကျမ်းအမျိုးမျိုးမှာ မွှေနှောက် ရှာဖွေ၊ နည်းတစ်နည်း နဲ့ တစ်နည်း ပေါင်းစပ်ကြည့်၊ နည်းသစ်တီထွင်ကြည့်နဲ့ (၄-၅-၆) နှစ်လောက် အချိန် ကုန်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ထီပေါက်ကိန်း ရှိ/ မရှိ နဲ့ ဆုပမာဏ ဘယ်လောက် ပေါက်မလဲ။ ဘယ်ဂဏန်းတွေကို ထိုးရမလဲ ဆိုတာကိုတောင် ပရိုဂရမ် ရေးထားပါတယ်။ အခုကျွန်တော့်ဆီမှာ အဲဒီ ပရိုဂရမ် ရှိနေပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ် အတိုင်းတွက်ချက်ပြီး လက်တွေ့ပေါက်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သတင်းစာထဲမှာ ကြော်ငြာ ထည့်ဘူးပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထီမပေါက်တော့ ထီဆုကြီး ပေါက်တဲ့လူတွေကို လိုက်ရှာ။ သူတို့ရဲ့ ဇာတာကို လေ့လာကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်းနှီးလာ ကြချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကို ဂဃနဏ လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ – ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့သူတွေ အတော်များများဟာ ထီပေါက်ပြီး (၁) နှစ် ကနေ (၃) နှစ်လောက် အတွင်းမှာ ပေါက်ခဲ့သမျှငွေတွေဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကုန်သွားပြီး ဖြူခါပြာခါကျသွားတာကို အတော် များများ တွေ့လာရပါတယ်။ အဲဒါတွေတွင်ဘဲလားဆိုတော့ မပြီးသေးဘူးဗျ။ ကျန်တဲ့ အိမ်တွင်းရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေ မှာပါ လာပြီး ထိခိုက်လာတာကို အသေအချာ သတိထားမိလာပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် |3Comments	# ကုန်ဈေးနှုန်း ဗေဒင်နဲ့ပတ်သတ်လို့ သိထားသမျှPublished November 12, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဗေဒင်မိတ်ဆွေလေး ကိုရန်းဂန်းက တောင်းဆိုလို့ ကုန်ဈေးနှုန်း အတက်အကျနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗေဒင် တွက်နည်းလေးတွေကို တင်ပြဆွေးနွေး ပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းကို ပြန်ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) နှစ်လောက်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ ကုန်သည် နဲ့ ဆီစက် လုပ်ငန်းရှင်လေး တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တော့ ဆိုတော့ ဒီဘာသာရပ်တွေကို တော်တော်လိုက်စားခဲ့ဘူးပါတယ်။ လက်ရိုး၊ လက်ဆန်း၊ သင်္ချာဗေဒ၊ ဟူးရား ဗေဒင် နည်းအမျိုးမျိုး၊ လမ်းအစုံစုံ နဲ့ နေ့မအိပ်၊ ညမအိပ်ကို တွက်ခဲ့ ချက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့ဗျာ – ငယ်ရွယ်သူလည်းဖြစ် ၊ ကြီးပွားချမ်းသာချင်စိတ်ကလည်း အလွန်များခဲ့တော့ ကုန်ဈေးနှုန်း အတက် အကျ သာမက ယိုးဒယားချဲထီ တို့ ၊ ဘောလုံးပွဲတို့လည်း အသေအလဲ တွက်ခဲ့ တာပေါ့ဗျာ။ လုံးဝနီးပါး မှန်ကန်တဲ့ ဖော်မြူလာ တစ်ခုတော့ ကျိန်းသေ ရှိရမယ်လို့ ယူဆခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အမှန် နဲ့ အမှား ပိန်မသာ၊ လိမ်မသာဖြစ်ရုံကလွဲပြီး သူဌေးလည်း ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ရာနှုန်းက နည်းပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှားတာက ပိုများလာလို့ လက်လျော့လိုက်ရပါတယ်။နောက်တော့မှ သိလာတာက ဒီလို မှန်ကန်တဲ့ ရာနှုန်း ဘာကြောင့် နည်းလာရသလဲဆိုရင် ဗေဒင်ပညာက မမှန်လို့ မဟုတ်ဘူး ဗျ။ “လောဘ” ဆိုတဲ့ နိမ့်ကျတဲ့စိတ်ကြောင့် အမှားများရတာပါ။အခုနေ လူတစ်ယောက်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်။ အနည်းဆုံး (၇၅) ရာနှုန်းမှန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် အလောင်းအစားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် “လောဘ” ပါလာတဲ့အတွက် ညစ်နွမ်းသွားပြီး အမှန်တရားတွေ ပျောက်ကွယ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်မှု ရာနှုန်းဟာ (၅ဝ) ရာနှုန်း အောက်ကို ကျလာခဲ့တယ်။ (၅ဝ) ရာနှုန်းအောက် ကျပြီ ဆိုကတည်းက ရှုံးပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုသိလာတဲ့ အချိန်ကစပြီး အလောင်းအစားတို့၊ ကုန်လှောင်တာတို့ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Continue reading →
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged mahaboke, MaHaBote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Leaveacomment	# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်းPublished November 9, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	အမေရိကန်နိုင်ငံ , အိုဘားမားနဲ့ (4)ဂဏန်း အကြောင်းကို ရေးပြီးတော့ (4)ဂဏန်း အကြောင်းကို ဆက်ပြီး ရေးချင်စိတ် ပေါ်လာလို့ ရေးလိုက် တယ်ဗျာ။ ဗဟုသုတပေါ့။
(4)ဂဏန်းဟာ ဂဏန်းဗေဒင်ပညာမှာ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂဏန်း တစ်ခုပါ။ (4)ဂဏန်းဟာ ပထဝီ၊ ဝါယော၊ အာပေါ၊ တေဇော ဆိုတဲ့ မူလဘူတ ဓါတ်ကြီး (4)ပါးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဂဏန်းပါ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် ပဋိစ္စသမုပ္ပဒ်ဆိုတဲ့ သစ္စာတရားဟာ (4)ပါးရှိပါတယ်။ သမုဒယသစ္စာ၊ ဒုက္ခသစ္စာ၊ မဂ္ဂသစ္စာ နဲ့ နိယောဓ သစ္စာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ “ပညတ်” တရားတွေ ဘယ်လောက် များများ၊ “ပရမတ်” တရားကတော့ (4)ခုသာ ရှိပါတယ်။ “စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ် ၊ နိဗ္ဗာန်” တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (4)ဂဏန်း အတွဲပါဘဲ။
နောက်ပြီး မဟာဘုတ်ပညာမှာ သုံးတဲ့ “အောင်၊ လံ၊ ထူ၊ စစ်၊ သူ၊ ကြီး၊ ပွဲ” ဆိုတာ တကယ်တော့ ဂြိုဟ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု “စတုရန်း အစီအစဉ်နဲ့” ချထားတာ မဟုတ်ပါလား။ ဂြိုဟ်တစ်ခုကနေ ဂြိုဟ်တစ်ခုကို (4)ခုမြောက် ရေတွက်ပြီး ချထားတာဖြစ်တယ်။ (၁ – ၄ – ဝ – ၃ – ၆ – ၂ – ၅ )
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged (4)ဂဏန်း သမားများ, သင်္ချာဗေဒ | 47 Comments	# အမေရိကန်နိုင်ငံ , ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်းPublished November 6, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဆန်းဗေဒင်ပညာရပ်၊နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရပ်တွေနဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်း ထားသလိုဘဲ ဘားရတ်အိုဘားမား ကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အာဖရိကန်နွယ်ဖွား သမ္မတ တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ မော်ကွန်းတင်သွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်သွား ခဲ့ပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီကတည်းက ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကို တွက်ချက် ကြည့်ရင်းနဲ့ နိုင်ချေရှိတဲ့ ဘားရက်အိုဘားမား ရဲ့ မွေးဂဏန်းကို သင်္ချာဗေဒ (Numerology) ပညာနဲ့ လေ့လာ ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ထူးခြားချက် တွေ တွေ့လာရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ (၄) ဂဏန်း စိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောရင် မမှားပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာ ဂျူလိုင်လ (၄) ရက်ဖြစ်သလို၊ ဂျူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ဟာ ကရကဋ်ရာသီခွင် ဖြစ်လို့ မိဿရာသီ ကနေ စပြီးရေရင် (၄) ခုမြောက် ရာသီ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ တစ်ခါ အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာလိုက်တဲ့ ၁၇၇၆ ခုနှစ်ဟာလည်း ရာစုဂဏန်းဖြစ်တဲ့ ၁၇ ကို ဖယ်ထားပြီး ဆယ်စုနှစ်ဂဏန်းကို ပေါင်းလိုက်ရင် (၇+၆)=၁၃=၁+၃= (၄)ဂဏန်းဘဲ ရပါတယ်။
နောက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘဝကနေ လွတ်မြောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတကြီး ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာဆိုရင်လည်း (၂၂)ရက်နေ့မွေးတဲ့ (၄)ဂဏန်းသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာစာတမ်းကြီးကို ရေးသား ကြေငြာ ခဲ့သူ (၃)ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ်တဲ့ သောမတ်ဂျက်ဖာဆန် ဟာလည်း (၁၃)ရက်နေ့မှာ မွေးတဲ့ (၄)ဂဏန်းသမားတစ်ဦးပါ။
ဒီလို အမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့တာ (၂ဝဝ) ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီး သမ္မတအယောက်ပေါင်း (၄၃)ယောက် တက်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာ ထူးခြားချက်ကြီး တစ်ခုကို သွားတွေ့မိပါတယ်။
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ (၄) ဂဏန်း, သင်္ချာဗေဒ, အမေရိကန်နိုင်ငံ | 1 Comment	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,452)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,955)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,517)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,298)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,379)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,536)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,567)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,928)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,279)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,262)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,083)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,046)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,811)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,749)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,297)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,110)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,831)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,472)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,182)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,136)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,541)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,470)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,253)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,220)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,889)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,668)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,468)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,010)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !